रोजगार - कानूनी सहायता समाज
नौकरी आवेदन र प्रक्रियाहरू
हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै भन्दा राम्रो कानून विद्यार्थीहरू, वकिलहरू, प्यारालिगलहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, अन्वेषकहरू र प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्नु र राख्नु हो जसले एउटै दृष्टिकोण साझा गर्दछ - गरिबीका कारण कुनै पनि न्यूयोर्कवासीलाई न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित गरिने छैन।
सबै हालको जागिर खुल्ला
आवास कार्यक्रम प्रबन्धक
कर्मचारी अधिवक्ता, घरबारविहीन अधिकार परियोजना
महान्यायाधिवक्ता, सामान्य निजामती कानुनी सेवाको प्रभारी
सहायक संयोजक अनुदान र अनुबंध
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, आपराधिक रक्षा अध्यागमन टोली
Paralegal Casehandler, आप्रवासन, आप्रवासी अवसर पहल
कर्मचारी अधिवक्ता आप्रवासन, आप्रवासी अवसर पहल
डेपुटी अटर्नी-इन-चार्ज, अध्यागमन कानून एकाइ
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, कम आय करदाता क्लिनिक
कर्मचारी अधिवक्ता, एचआईभी/एड्स प्रतिनिधित्व परियोजना
Paralegal Casehandler, आप्रवासन हिरासतमा हटाउने रक्षा
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, आवास न्याय कार्यक्रम - टेनेन्ट रक्षा
कर्मचारी अधिवक्ता, स्वास्थ्य कानून एकाइ
अधिवक्ता पर्यवेक्षण, अध्यागमन हिरासतमा हटाउने रक्षा
कर्मचारी अधिवक्ता, अध्यागमन - हिरासतमा हटाउने रक्षा
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, अध्यागमन - संघीय अभ्यास
Paralegal Casehandler, आवास / रोबिन हुड पहुँच
Paralegal Casehandler, आवास न्याय - किरायेदार रक्षा
कर्मचारी अधिवक्ता, आवास समूह वकालत
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, रोजगार कानून एकाइ
कर्मचारी अधिवक्ता, आवास भाडामा लिने रक्षा (शहरव्यापी)
महान्यायाधिवक्ता, आवास न्यायधीश (शहरव्यापी)
सामान्य स्वयंसेवक, प्रो बोनो
Paralegal II, डिजिटल फोरेंसिक इकाई
कर्मचारी अधिवक्ता, सामुदायिक न्याय इकाई
Paralegal Casehandler, कैदीहरूको अधिकार परियोजना
Paralegal Casehandler, Parole Revocation रक्षा इकाई
मुकदमेबाजी Paralegal II, आपराधिक अपील ब्यूरो
Plea Project Paralegal II, आपराधिक अपील ब्यूरो
शमन विशेषज्ञ, विशेष मुद्दा एकाइ
अदालत-आधारित कार्यालय प्रशासक, म्यानहट्टन परीक्षण
शमन विशेषज्ञ, हत्या रक्षा टास्क फोर्स
मिटिगेसन विशेषज्ञ, एरेनमेन्ट डिकार्सरेशन प्रोजेक्ट
अन्वेषक, हत्या रक्षा टास्क फोर्स
पर्यवेक्षण वकील, पारिवारिक कानून/वैवाहिक
फोरेन्सिक सामाजिक कार्यकर्ता (ब्रुकलिन)
प्यारालिगल I (ब्रोंक्स)
कर्मचारी अधिवक्ता, कैदी अधिकार परियोजना (पीआरपी)
Paralegal I, डिस्कवरी एकाइ
कर्मचारी अधिवक्ता, डिजिटल फोरेन्सिक इकाई (ब्रुकलिन)
Paralegal II (शहरव्यापी)
स्टाफ अटर्नी, प्यारोल रिभोकेशन डिफेन्स युनिट (पतन २०२२)
रिट स्टाफ अटर्नी, प्यारोल रिभोकेसन डिफेन्स युनिट
स्टाफ अटर्नी, प्यारोल रिभोकेसन डिफेन्स युनिट
पर्यवेक्षण पारालीगल, आपराधिक अपील ब्यूरो
साथी, आपराधिक अपील ब्यूरो/गलत अपराध एकाइ
अनुभवी अपराधी अपराधी रक्षा वकील
फोरेन्सिक सामाजिक कार्यकर्ता (ब्रोंक्स)
पर्यवेक्षण अधिवक्ता, PRDU
प्रभारी नायव महान्यायाधिवक्ता
सामाजिक कार्य निर्देशक
प्रभारी सहायक अधिवक्ता
Paralegal II, Bronx परीक्षण कार्यालय
प्रो बोनो अभ्यास
प्रो बोनो स्कॉलर्स २०२२-२३
निर्देशक, जातीय न्याय एकाइ
डाटा विश्लेषक, MIS
मानव संसाधन व्यापार साझेदार
मानव संसाधन संयोजक, स्वास्थ्य र कल्याण
श्रम सम्बन्ध निर्देशक
तपाईं हाम्रो मा पोस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ADP भर्ती पोर्टल, र तपाईंको रुचि अनुरूप कुनै पनि पदमा आवेदन दिनुहोस्। आवश्यक कागजातहरू पर्छ एकल PDF को रूपमा अपलोड गर्नुहोस्। यदि कागजातहरू एउटै PDF मा छैनन् भने तपाईंको आवेदन प्रशोधन गरिने छैन।
सबै आवश्यक सामग्रीहरू बिना पेश गरिएका आवेदनहरू प्रशोधन गरिने छैन।
तपाईंले आफ्नो आवेदन मार्फत पेश गर्नुपर्छ ADP भर्ती पोर्टल विचार गर्न को लागी। रिजुमे र अन्य कागजातहरू हाम्रो पेश गरियो jobpostquestions@legal-aid.org इमेल इनबक्स प्रशोधन गरिने छैन।
आन्तरिक आवेदकहरू/वर्तमान LAS कर्मचारीहरू: यदि तपाइँ कुनै पनि पदहरूमा आवेदन दिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो लग इन गर्नुहोस् आन्तरिक क्यारियर साइट आबेदन दिनका लागि। यदि तपाइँसँग लग इन गर्न कुनै समस्या छ भने, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् jobpostquestions@legal-aid.org सहयोगको लागि।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो आवेदन पूरा गरेपछि तपाईंले पुष्टिकरण इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईको खातामा लग इन गरेर तपाईको आवेदनको स्थिति हेर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँको सीप तपाईले आवेदन गरेको स्थितिसँग मेल खान्छ भने, भर्तीकर्ता वा संस्थाको प्रतिनिधिले तपाइँलाई फोन वा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्छ। हाम्रो संस्थासँग रोजगारीको सम्बन्धमा तपाईलाई पठाइएको कुनै पनि सञ्चारको लागि तपाईले नजर राख्नुपर्छ।
हामी तपाइँसँग हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरू स्वागत गर्दछौं। सोधपुछ हाम्रो इमेल इनबक्स मा पठाउन सकिन्छ jobpostquestions@legal-aid.org.
हामी सोध्छौं कि एप्लिकेसन स्क्रिनिङको समयमा तपाई धैर्य रहनुहोस्।
यदि अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भयो भने, हामी तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा, फोनमा वा भिडियो मार्फत कुरा गर्ने छनौट गर्न सक्छौं। व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्वार्ताहरू काम स्थानमा आयोजित हुन सक्छ, र कामदार प्रबन्धक वा समिति सदस्यहरू द्वारा आयोजित हुन सक्छ।
हामी तपाईंलाई कानूनी सहायता समाजको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं, साथै तपाईंले अन्तर्वार्ता लिनुहुने स्थितिको बारेमा केही अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछौं। हामीले तपाईंलाई चिन्नको लागि समय निकाल्ने क्रममा, हामी आशा गर्छौं कि तपाईंसँग हाम्रो लागि पनि केही प्रश्नहरू छन् ताकि हामी निश्चित हुन सक्छौं कि हाम्रो संस्था तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि, भर्ती प्रबन्धक र/वा समितिले सबै उम्मेद्वारहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ, र कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
हामी तपाईंलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा धैर्य रहन अनुरोध गर्दछौं।
प्रस्तावहरू र अनबोर्डिङ
एक पटक भर्ती निर्णय गरिसकेपछि, इमेल मार्फत चयन गरिएको उम्मेद्वारलाई प्रस्ताव विस्तार गरिनेछ। उम्मेद्वारले समीक्षा गरी प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। एक पटक प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि, सफल उम्मेद्वारले अनबोर्डिङ कागजी कार्य पूरा गर्न आवश्यक हुनेछ।
हामी तपाईंलाई प्रोत्साहन दिन्छौं:
हाम्रो मा हाम्रो भर्खरको जागिर खुल्नेहरूको लागि सूचनाहरू प्राप्त गर्न साइन अप गर्नुहोस् ADP भर्ती पोर्टल, मा क्लिक गरेर मलाइ खबर गर्नु टांक।
"रोजगारी खोज्नेहरूका लागि संसाधनहरू" खोजी उपकरण जाँच गर्नुहोस् जुन तपाइँसँग पोस्टिङहरूमा आवेदन गर्नु अघि हुन सक्छ।
सार्वजनिक हित कानूनसँग सम्बन्धित वर्तमान घटनाहरूको शीर्षमा रहनुहोस्, साथै हाम्रो गृहपृष्ठमा "नवीनतम समाचार र आगामी घटनाहरू" हेरेर कानूनी सहायता समाजमा संलग्न घटनाहरू र पहलहरूको बारेमा जानकारी राख्नुहोस्।
आवेदन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ; यद्यपि, हामी आशा गर्छौं कि यसले तपाईंलाई अन्य अवसरहरूको लागि आवेदन दिन निरुत्साहित गर्दैन। हामी सही व्यक्तिलाई सही काममा जोड्न खोज्छौं, चयन गरिएको व्यक्तिलाई यस गतिशील संगठनको एक हिस्सा बनाउँदै।
समान रोजगारीको अवसर कानुन हो
समान रोजगार अवसर (EEO) नियोक्ताको रूपमा, कानूनी सहायता समाजले वास्तविक वा कथित जाति वा रंग, आकार (हड्डीको संरचना, शरीरको आकार, उचाइ, आकार सहित) को आधारमा आफ्ना कर्मचारीहरू र आवेदकहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण रोजगार कार्यहरू र व्यवहारलाई निषेध गर्दछ। र तौल), धर्म वा सम्प्रदाय, बिरानोपन वा नागरिकता स्थिति, लिङ्ग (गर्भावस्था सहित), राष्ट्रिय उत्पत्ति, उमेर, यौन झुकाव, लैङ्गिक पहिचान (कसैको लिङ्गको आन्तरिक गहिरो-निहित भावना जुन एउटै वा फरक हुन सक्छ। जन्ममा; कसैको लिङ्ग पहिचान पुरुष, महिला, न त वा दुबै हुन सक्छ, जस्तै, गैर-बाइनरी), लिङ्ग अभिव्यक्ति (लिङ्गको प्रतिनिधित्व मार्फत व्यक्त गरिएको, उदाहरणका लागि, कसैको नाम, सर्वनामको छनोट, कपडा, कपाल काट्ने, व्यवहार, आवाज, वा शरीरका विशेषताहरू; लिङ्ग अभिव्यक्ति विशिष्ट रूपमा पुरुष वा महिला नहुन सक्छ र विशिष्ट लिङ्ग पहिचानहरूमा तोकिएको परम्परागत लिङ्ग-आधारित स्टिरियोटाइपहरू अनुरूप नहुन सक्छ), असक्षमता, वैवाहिक स्थिति, सम्बन्ध tionशिप र पारिवारिक संरचना (घरेलु साझेदारी, बहुआयामिक परिवार र व्यक्तिहरू, छनोट गरिएको परिवार, प्लेटोनिक सह-अभिभावकहरू, र बहुपुस्ताका परिवारहरू सहित), आनुवंशिक जानकारी वा पूर्वनिर्धारित आनुवंशिक विशेषताहरू, सैन्य स्थिति, घरेलु हिंसा पीडित स्थिति, गिरफ्तारी वा पूर्व-रोजगार सजाय अभिलेख, क्रेडिट इतिहास, बेरोजगारी स्थिति, हेरचाहकर्ता स्थिति, तलब इतिहास, वा कानून द्वारा सुरक्षित कुनै अन्य विशेषता।
हामी यो साइट कुनै पनि र सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँचयोग्य बनाउन प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ हाम्रो वेबसाइटको पहुँचको बारेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ वा आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्: JobPostQuestions@legal-aid.org, सोमबार देखि शुक्रबार 9:30 AM देखि 4:30 PM सम्म।
रोजगार खोज्नेहरूका लागि स्रोतहरू
तपाईंले आवेदन गर्नु अघि मार्गदर्शन चाहिन्छ? हाम्रो भर्ती टोलीले लोकप्रिय स्रोतहरू चयन गरेको छ जसले तपाईंको आवेदन प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्नेछ।
COVID खोप जानकारी
मास्क, खोप, र परीक्षण सम्बन्धी COVID-19 सुरक्षा नीति
आवासको लागि अनुरोध: खोपबाट चिकित्सा छूट
धार्मिक आवास अनुरोध फारम
समर्थित ब्राउजरहरू र अतिरिक्त समर्थन वस्तुहरू
यस साइटका लागि समर्थित ब्राउजर र अपरेटिङ सिस्टमहरू के हुन्?
ADP भर्ती पोर्टल प्रयोग गर्दै
मैले पहिले नै पेश गरेको आवेदन कसरी सम्पादन गर्न सक्छु?
मैले पहिले नै पेश गरेको आवेदन कसरी फिर्ता लिन सक्छु?
म लग इन गर्न वा मेरो पासवर्ड पुन: प्राप्त गर्न सक्दिन, के मैले आवेदन दिन अर्को इ-मेल प्रयोग गर्नुपर्छ?
म हालको/पूर्व इंटर्न हुँ- मैले आन्तरिक उम्मेदवारको रूपमा आवेदन दिनु पर्छ?
शीर्षक बाट ब्राउज गर्नुहोस्
लग ईन गर्दै
क्याम्पस अन्तर्वार्ता (OCI)
जागिरको प्रस्तावलाई जवाफ दिँदै
प्राविधिक कठिनाइहरू वा पोस्टिङ सम्बन्धी प्रश्नहरूको लागि, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यस इनबक्समा पठाइएका पुन: सुरुवातहरू प्रशोधन गरिने छैन।